Ungabongeza njani ubugcisa bokugqibela ukuba uyilo lomzobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Xa sihambisa ifayile kumshicileli sifuna ukuvelisa kwakhona kufuneka sihambise ifayile ethile, oku kwaziwa njenge ubugcisa bokugqibela.
Ubugcisa bokugqibela buyimfuneko uyilo lwethu lusondele kangangoko kunokwenzeka kumsebenzi wedijithaliOko kukuthi, le siyibonayo kwiscreen.
1 Uyigcina njani ifayile
2 Iinkcukacha eziza kuthathelwa ingqalelo
Uyigcina njani ifayile
El ifomathi Esigcina kuyo ifayile iya kubaluleka kwisiphumo sokugqibela soshicilelo. Nanini na xa sihambisa ubugcisa bokugqibela siya kukhetha ifomathi yePDF. Into esiza kuyiphumeza ngale fomathi kukuba akukho nto iphuma endaweni, Yonke into iya kuhlala ihlengahlengisiwe kuyilo lwethu kwaye siya kuhlonipha ubungakanani betafile yomsebenzi. Ke ngoko, indlela emayilandelwe iya kuba yile ilandelayo:
Imenyu-Gcina njenge ...
Iwindow iya kuvela kwaye ezantsi ngasekhohlo kuya kufuneka sikwenze khetha ifomathi yePDF. Siza kucofa ekugcineni kwaye isikrini siza kuvela kwakhona apho sinokuhlengahlengisa khona iiparameter zokuthumela ngaphandle esifuna. Kwicala lasekhohlo sinokumakisha zonke iimpawu ngokuhamba kwizikrini ezahlukeneyo.
NGOKUBANZI: Kuyacetyiswa ukuba ujonge ukhetho "lokuGcina ukuBoniswa koMfanekiso kumandla alo" ukwenza ukuba ibe yi uxwebhu oluhlelekileyo, ngamanqanaba. Kwakhona, ayonzakalisi ukujonga "Ukulungiselela ukujonga ngokukhawuleza kwiWebhu."
AMANQAKU NEZIBONELELO: Ukuze umatshini wokushicilela wazi apho kufuneka usikwe khona kufuneka bonisa amanqaku ezityalo. Ukukhetha nje "amanqaku amiselweyo" kunye "neempawu zobhaliso" kuya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo. Ukongeza, ukuqinisekisa ukuba asizukufumana mda umhlophe, kukhethwa oko Yongeza iimilimitha ezi-2 ukuya kwezi-3 zegazi.
PHUMA: Kule thebhu sinokukhetha "ukuguqula ukuya kwindawo" kuguquko lombala.
Xa zonke iiparameter ziphawulwe, ukuba sineefayile ezininzi esifuna ukufaka kuzo ukuthunyelwa kwelinye ilizwe, sinokukhetha ukuzigcina useto olungagqibekanga ngokunqakraza iqhosha esikujikelezile ngombala obomvu kumfanekiso ongezantsi.
Iinkcukacha eziza kuthathelwa ingqalelo
Ngaphambi kokuba ugcine iprojekthi yethu njengobugcisa bokugqibela, kubalulekile ukuba sigcine izinto ezintathu engqondweni: umbala, isicatshulwa kunye nomfanekiso.
Ukuba umsebenzi wethu kuya kufuneka uprintwe kamva, imo yombala ekuya kufuneka sisebenze ngayo yi-CMYK. Singayijonga ngokulandela le ndlela:
Ifayile-imo yoxwebhu lombala.
Ukuba umsebenzi wethu unombhalo kufuneka vectorize yona. Ukuba awuyazi ukuba ungayenza njani, sicebisa ukuba undwendwele oku kulandelayo nqaku apho ichazwa ngendlela elula kakhulu kwaye kulula ukuba yenziwe njani.
Zonke imifanekiso kufuneka ibe ikumgangatho ofanelekileyo kunye nemibala ukuprinta. Eyona nto iphambili kukujonga ukuba ubuncinci sinayo Isisombululo se-dpi eyi-150 malunga. Ukongeza, umfanekiso kufuneka ube gcina kwi-CMYKNgokuchasene noko, imibala inokutshintsha kakhulu kwaye asizukufumana iziphumo ezilindelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Hambisa ubugcisa bokugqibela, ulwazi olusisiseko
UMercedes perez crespo sitsho
??? I-150 dpi yokuprinta umfanekiso ngomgangatho ?????… i-300 dpi ngobukhulu bokwenyani !!!!!… ke kwenzeka ntoni kwaye siyakubona esikubonayo !!!!
Phendula uMercedes Pérez Crespo
UMauricio Sagon sitsho
UMercedes Pérez Crespo uthi ubuncinci be-dpi eziyi-150 kodwa hayi ukuba esi sisombululo kufuneka sisetyenziswe kuwo nawuphi na umfanekiso, kwaye ayichazi nokuba yeyokuprinta i-lithographic okanye ukuprinta kwidijithali, kuba sisisombululo esaneleyo.
Phendula uMauricio Sagon
UMauricio Sagon, uthi ngokoqobo: "Yonke imifanekiso kufuneka ibe nomgangatho kunye nemibala efanelekileyo ekuprintweni." ...
Kwaye xa uprinta imibala kufuneka ikwi-CMYK ...
Ngaba kuyacaca ukuba lushicilelo lweoffset?
Kwaye andivumi, kuba ukuprinta ngokwedijithali akulunganga ... ????
UMiguelángel Carretero sitsho
Molo, kwindawo yokuqala, NGOKUBANZI, ukhetho ngu "Gcina", hayi "Xoxa ngezakhono zokuhlela kwi-Illustrator ..". Impazamo yomnwe. Ukubulisa.
Phendula uMiguelángel Carretero
UJudit Murcia sitsho
Njengoko kuchaziwe kwiposti, kuyacetyiswa ukuba mayibe yi-150 dpi ubuncinci. Kananjalo, uhlala uthathela ingqalelo ubungakanani apho ushicilelo lwenziwa khona :)
Phendula kuJudit Murcia
Enkosi ngokujonga, impazamo sele ilungisiwe !! Umnwe kunye nomkhangeli ozenzekelayo odlala amaqhinga hehe
Umzobo omangalisayo wepensile womnyango eMilan Cathedral
Iipuzzle zeMontage ezimangalisayo zikaKlein